Juventus ayaa qarka u saaran inay la kulanto wakiilka xiddiga De Ligt | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Juventus ayaa qarka u saaran inay la kulanto wakiilka xiddiga De Ligt
Juventus ayaa qarka u saaran inay la kulanto wakiilka xiddiga De Ligt
Muqdisho – Calciomercato ayaa fahamsan in Juventus ay qorsheyneyso in ay kulan la yeelato wakiilka Mino Raiola ee laacibka Holland iyo Ajax Matthijs De Ligt, iyagoo doonaya inay ku garaacaan Barcelona tartanka loogu jiro laacibkaan.
Xiddiga da’da yar ayaa u ciyaaray xulka tababare Ronald Koeman ee Netherlands shalayto, waxaana uu ka mid ahaa ciyaartoydii ugu fiicneyd garoonka, isagoo ka caawiyay Holland inay 2-0 kaga garaacdo ku guuleystiyasha Koobka Adduunka France.
Majaladda Sport ee kasoo baxda Catalan, ayaa sheegeysa in madaxda Barcelona iyo madaxda kooxda ay kulmeen shalay, si ay u dhameystirto qorshe ay kula saxiixaneyso De Ligt.
Laakiin Calciomercato ayaa fahamsan in Juventus ay haatan qorsheyneyso inay kulan la yeelato Raiola maalmaha soo socda, madaama ay doonayaan inay tartan adag la galaan Barcelona tartanka loogu jiro daafacan.
Kooxda Ajax ayaa barbaarkaan ku qiimeyneyso qiyaastii 70 milyan euro, mana aqbali doonto wax dalab ah oo ka hooseeya qiimaasi.
Juventus ayaa xiriir dhow la leh Raiola, waxaana ay dareensan tahay inuu ka caawin karo inay soo xero geliyaan De Ligt, kaasi oo horey u booqday tababarka kooxda horaantii sannadkan.
Barcelona ayaa diyaarisay dhaqaalle loogu talagalay ciyaaryahanka, iyadoo Manchester City iyo Tottenham ay sidoo kale diyaar yihiin.
Previous: Dhib ceynkee ah ayaa ka dhalan kara dawo uusan dhaqtar qorin?
Next: Talo iyo tusaaleyn – lamaanaha baraha bulshada ka soo muuqda
Mourinho oo rumeysan in Spurs ay u baahan tahay weeraryahan cusub
Ousmane Dembele oo iska diiday u dhaqaaqitaanka Manchester United
Manchester City oo Man United iyo Spurs kula biirtay tartanka Milik